Brunéi : Amidy Anaty Bilaogy Koa Ny Mofomamy · Global Voices teny Malagasy
Brunéi : Amidy Anaty Bilaogy Koa Ny Mofomamy
Voadika ny 18 Desambra 2017 12:14 GMT
Mampiasa ny blaogy ho fitaovana fivarotana mba hamarotana ny entany ireo mpanao mofo sy mpanao mofomamy ao amin'ny sultanat an'i Brunéi . Maro no renim-pianakaviana na matihanina izay manao ny famokarana mofomamy amin'ny tapa-potoany ary manolotra ny vokany ao amin'ny blaoginy tsirairay avy. Tena nandeha tsara izany ho an'ny maro ary nitondra vokany teny amin'ny tontolon'ny media teo anivon'ireo mpamaky blaogy.
Ireto misy ohatra momba ireo zavatra atolotry ny blaogera sasany ao amin'ny blaoginy tsirairay. Indrisy anefa, matetika tsy hita raha tsy ao Brunéi ireo vokatra ireo satria akora mora simba no ampiasaina.
Pavlova nataon'i Bunny
Maro amin'ireo mpanao mofomamy ireo, toa an'i Breadstop [amin'ny teny anglisy, toy ireo rohy manaraka ato], no manasongadina ny fampiasana akora mahasalama amin'ny fanamboarana ireo mofomaminy. Mirehareha amin'ny sakafo mahasalama ihany koa ny Bunny's Yummies. [amin'ny teny anglisy ireo rohy]:
Momba ny sakafo mahasalama aho. Tsy mampiasa akory mpitahiry, hanitra na loko voatrolombelona aho ao anatin'ny mofomamiko. Tena hanitra avy amina voankazo tena izy, tahona lavanila tena izy, sôkôla tena kakaô, toy izany koa ny kafe sy ireo voan-javatra maro samihafa, no ampiasaiko. Kely ihany koa sisa ny atody ataoko ao amin'ny mofomamiko, mba ho maivamaivana kokoa izy ireo. Vita amin'ny fotoana ilàna azy ny vokatra rehetra ataoko mba ho vonona rehefa alaina ny kaomandy.
Mofomamy kely nataon'i Candy
Tsy namela an'i Brunéi ity fironana vaovao erantany amin'ny fanamboarana mofomamy kely be dia be ity, ary tena lasa ankafizin'ireo blaogera indrindra izy ireo, sy ireo mpanjifa ihany koa. Ireto blaogera manaraka ireto dia niompana manokana tamin'ny fanamboarana ireo mofomamy kely ireo ary manolotra vokatra maro karazana ho an'ireo mpanjifany tsirairay avy: Kitchen of Jasmine, Cupcake Paradise, Candy, Sinah Bakery, Sugarush, Taste on Tray [amin'ny teny anglisy] ary Warisan Ummi [amin'ny teny bhasa].
Manoritsoritra ny famokaran'ny orinasany [amin'ny teny anglisy] ny Cit's Cupcakes:
Manao haingony tsotsotra ho an'ny mofomamy rehetra ataoko aho fa afaka manao haingony manokana ihany koa amin'ny vidiny ambony. Afaka manao mofomamy manana endrika maoderina, mofomamy amin'ny endrika 3D, sns.. aho.
Mitantara [amin'ny teny anglisy] i Underserenity, mpanao mofomamy ao amin'ny blaogy Sugarush:
Alina vitsivitsy lasa izay, nofohazin'ny nofy toa tena izy aho, taorian'ny torimaso naharitra ora iray monja, ary tsy nahita tory intsony. Inona moa no zavatra hafa azoko atao amin'ny 4h30 maraina? MANAO SAKAFO! Adala be, eny fa na izany aza, tena nanao mofomamy ”Karipetra Mena” kely be dia be nosorana hatrotro tamin'ny fromazy misy krema ary mofomamy kely be dia be vita amin'ny sôkôla norarahana krema misy dibera nafangaro lavanila.
Mpanjifa sasany toa an'i AnakBrunei, no mitantara ny traikefa ara-tsakafony [amin'ny teny anglisy] :
Tena matsiro be fotsiny tsotra izao ireo mofomamy ireo… ”ireo fotsifotsy be ny amboniny no antsoina hoe ”Karipetra Mena” miaraka amin'ny fromazy misy krema fa ireo misy sôkôla kosa dia vita avy amin'ny sôkôla mainty, raha ny hevitro, ary tsy dia tena mamy loatra. Mifandraisa amiko raha te-hahazo ny fifandraisana amin'ilay zatovovavy manana talenta nanao azy ireo ianao.